Pizza - isidlo eziningi kangaka ozithandayo inhlama eyayigcwele. Zihluke: round futhi square, ezincane nezinkulu, ezazigxishwe inyama kanye imifino. Umuntu ngamunye bangakhetha ilungelo bona ngokugcwalisa ezidayisa i-pizza noma ukuzilimaza iIgama. Lesi sihloko sibheke indlela ukudweba izigaba pizza.
Ngaphambi lubonisa iyiphi into yangempela, kubalulekile ukufunda ngokucophelela futhi ucabangele. Lokhu kuzosiza ukuba ugweme amaphutha amaningi kubangelwa inattention futhi ukuntula ulwazi. Ukuthola ekutadisheni umbuzo indlela ukudweba pizza ngepeniseli, kufanele sinake ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Ngokuvamile kuba round umumo, futhi izingcezu kukhona yemikhakha mbuthano.
Phakathi emaphethelweni pizza, futhi imiqulu, njengoba umthetho, kukhona isikhala - okubizwa ngokuthi uqweqwe inhlama.
Njengoba ngokuvamile iningi imikhiqizo isoseji asetshenziselwa ukugxusha, uthathe tincetu, utamatisi tincetu, tincetu ukhukhamba nokunye. N.
Ushizi iyisici esibalulekile pizza. Ngaphansi kwethonya lokushisa lincibilike futhi ubukeka ngempela abstract.
Konke lokhu kwaziswa kufanele kubhekwe ku umdwebo wakho, ukuze uthole efanayo kakhulu kulokho eqale iyikho. I asondeze umculi ekuphileni, ezithakazelisayo kakhulu futhi ibonakala ingokoqobo ke uthola umsebenzi. Ukunakwa nje njengebalulekile ukuqeqesha, kanye nokuhamba kwezindikimba isandla ngepeniseli.
Izinyathelo ukudala iphethini
Ake sihlole kabanzi ukudweba izigaba pizza kanjani:
1. Khetha ifomethi isithombe kanye Ubukhulu eziyisisekelo futhi izingcezu pizza.
2. uchaza isizinda pizza (circle) kanye tincetu ezintathu esingunxantathu. Ngakho kwemvelo, lapho bobabili kuyenzeka ihlangane.
3. Engeza kumila izingcezu esiyindilinga namasoseji. Abakwazi akhiwe ngempela nemiyalezo, kodwa akufanele eqele ngalé kwemingcele test round.
4. Namathisela tincetu pizza ifomu lemvelo - a wemboni wombuthano, ngakho ohlangothini esifushane round yabo. Ungengeza futhi ukuba ezinye asymmetry elingeza imidwebo ukuphi.
5. Faka i-tincetu esiyindilinga isoseji ku Imi izingcezu pizza.
6. dorisovyvat bobunjwa abstract ushizi elicibilikile.
7. Engeza imininingwane embalwa - tincetu iminqumo.
Ngakho, ukuxazulula inkinga, indlela ukudweba pizza ngesimo indaba emfushane. It kungenziwa zaveza noma kulekelelwa njengoba oyifunayo.
Kanjani ukuqedela wobuciko?
Ukuze uthole isithombe wabheka ezithakazelisayo, kufanele ngempela ukupenda. Ngakho kubalulekile ukuba zama ukunikeza umthamo pizza esebenzisa hatching noma ukukhethwa ezihlukile. Thola indlela ukudweba pizza - umsebenzi ngempela yokudala, njengoba kuvumela isidlo izinhlobo eziningi ofakwe. Ikakhulukazi ukubukeka mnandi zaveza utamatisi elibomvu, ushizi ophuzi, obomvu nonsundu isoseji namaqabunga aluhlaza oregano. Kuyinto ngenxa enhle umbala inhlanganisela athola khona umsebenzi mnandi ukuthi ngifuna ukusebenza empilweni yakho, futhi udle!
Ngakho, lo mbuzo: "Udweba kanjani pizza" - ihlaziye ngokuningiliziwe, futhi akufanele okungadala ubunzima. Ukuze Uhlaka okutholakala kalula futhi ngokwemvelo, kubalulekile ukugcina izwe elibazungezile futhi njalo ukuqeqesha.